काँग्रेस, माओवादी र एमाले महाभेलामा, सरकार भन्छ- भेला नगर्नु (भिडियो) « News24 : Premium News Channel
काँग्रेस, माओवादी र एमाले महाभेलामा, सरकार भन्छ- भेला नगर्नु (भिडियो)
काठमाडौं । सरकारलाई फेरि कोरोनादेखि डर लाग्न थालेछ । कोरोना बढ्ने संकेत पाएर हो या अर्को कुनै संकेत पाएर हो सरकारले सूचना जारी गरेर आज राति १२ बजेदेखि भीडभाड नगर्न, मेला र महोत्सवको आयोजना नगर्न र जात्रा तिर नलाग्न सूचना नै जारी गरेको छ ।
देश चाडबाडको रौनकमा पसिसकेको छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरु आआफ्नो दल भित्रको महाधिवेशनलगायत बिभिन्न उत्सवको उमंगमा रमिरहेका छन् ।
काठमाडौं उपत्यकासहित देशभरका मठ मन्दिर देवालय शिवालय, गुम्बा, मस्जिद र चर्चहरु भर्खर खुल्न थालेका छन् । यही बेला जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आदेश जारी गर्दै आज रातिदेखि सबै गतिविधिमा नियन्त्रण गर्र्ने जनाउ दिएको छ ।
प्रश्न यहाँनेर छ सिडिओ साहब । आजदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रको विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीको २२ औं राष्ट्रिय सम्मेलन के हुन्छ अब रु प्रज्ञा भवनमा ८ सय ९९ जना प्रतिनिधिसहित १३ सय बढी सहभागी भएको यो सम्मेलनमा सिडिओ साब तपाईद्धारा जारी आदेश लागू हुन्छ कि हुँदैन ?
भोलि शुक्रबारदेखि ललितपुरको गोदावरीमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशन सुरु हुँदैछ । जहाँ देशभरबाट आएका ७ हजार बढी प्रतिनिधि सहभागी हुँदैछन् । असोज १७ गतेसम्म चल्ने विधान महाधिवेशन यसपटक एमालेले पृथक परिस्थितिमा गर्दैछ ।
उस्ले यसपटक मञ्चमा देखिने धेरै आदरणीय नेताहरु र सभा हलका कुर्सीमा संगै बस्ने धेरै सहयात्रीहरुलाई छुटाउँदै छ । भनौ धेरैलाई ‘मिस’ गर्दै छ । हलमा नअटेकालाई टेण्टमा राख्ने तयारी भइरहेको ७ हजार बढी प्रतिनिधि सहभागी हुने यो महाधिवेशनलाई सिडिओ साब तपाईले जारी गर्नु भएको आदेशले छुन्छ या छुँदैन ?
नेपाली काँग्रेस १४ औं महाधिवेशनको रनाहामा छ । देशभरका ६७४३ वडाबाट सुरू भएको महाधिवेशनको रौनक अहिले स्थानीय तह र कतै कतै प्रदेश स्तरमा रम्दैछ । काठमाडौ उपत्यकाका १३ वटै नगरपालिकामा काँग्रेसलाई महाधिवेशनको सरगर्मीले छोपेको छ ।
काँग्रेसजनलाई कोरोनाको होइन प्रतिनिधि बन्न पाइन्छ कि पाइन्न भन्ने डर छ । कतिलाई भने आफ्नाहरुलाई पदमा पुर्याउन पाइन्छ कि पाइदैन भन्ने पीर छ । महाधिवेशनको यही रौनकका कारण काँग्रेस भित्र धेरैलाई अहिले नै दशैं लागिसकेको छ । अब सिडिओ साब तपाईको आदेशले काँग्रेसलाई समस्यामा पार्छ कि पार्दैन ?
जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंद्धारा जारी आदेशको ३ नम्बर बुँदाको ‘क’ मा बैठक, गोष्ठी, सेमिनारहरु भर्चुअल माध्यमबाट गर्ने, भौतिक उपस्थितिमा गर्नै पर्ने भएमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना अनिवार्य गराउने, स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गराउने दायित्व सम्बन्धित आयोजकको हुने र पालना नभएको पाइए निजलाई कानून बमोजिम कारवाही हुने उल्लेख छ ।
अब भन्नुहोस् सिडिओ साब सत्तारुढ र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुको यो सभा सम्मेलनमा स्वास्थ्य मापदण्डको पालना भए नभएको अनुगमन कस्ले गर्ने रु ताकत छ तपाईहरुको रु छ भने गर्नुस् छैन भने तपाईले जारी गरेको आदेश आजै फिर्ता लिनुस् । किन हसाउँनु हुन्छ नेपाली जनतालाई बारम्बार ?
भक्तपुरमा गाईजात्रा मनाउँदा लागेको भीड देशवासीले मात्र नभइ संसारवासीले देखे । संस्कार, संस्कृति अनि परम्पराको निरन्तरतालाई प्राण जतिकै प्यारो मान्ने काठमाडौं उपत्यकावासीलाई जात्रा नमनाउँ भनेर आदेश जारी गरेर दलहरुलाई जस्तै जिस्काको मात्र हो कि साँच्चै भनेको हो सिडिओ साब । नेपाली जनता सोझा छन् । आदेश सबै मान्छन सरकारको ।
नगर है भन्दा गर्दैनन पनि । तर दलहरुलाई जथाभावी गर्ने छुट दिएर जनतालाई मात्र जात्रा नमनाउनु , दशैंंमा मान्यजनको आर्शीवादको टीका पनि दूरीमा बसेर लगाउनु भन्दा मान्लान र ?
यो मजाक पनि अति भद्दा मजाक भयो नि सिडिओ साब । दलहरुको सभा सम्मेलनमा सुरक्षाको व्यवस्था तपाईहरु नै गर्ने अनि सकेसम्म भर्चुअल माध्यमबाट गरे हुन्थ्यो भन्दै आदेश जारी गर्ने । तालमेल कहाँ मिल्यो ?
अब लाग्छ काठमाडौंको असन र न्यूरोडमा भीड । देशभरका बजारहरुमा गाउँघरबाट अब थुप्रिन्छ गाउँलेको भीड । देशभरका सीमाहरुमा अब लाग्छ भारतबाट आउनेको लर्को । सवारी साधनको हुटमा बसेर अब चल्छ जनताको सवारी ।
देशभरका शक्तिपीठहरु र मन्दिरहरुमा नौरथा सुरु भएपछि लाग्छ श्रद्धालुको मेला । कसरी रोकिएला र बल्ल खुलेका शक्तिपीठ र मन्दिरहरुमा मानिसहरुको ताँती रु कोरोनोको पछिल्लो तीन दिनको रेकर्ड पल्टाउँदा संक्रमितको संख्या हजार भन्दा माथि नै छ । कहिले कहिले तेहेरो अंकमा ओर्लिए पनि संक्रमितको संख्या जहिले पनि हजारको हाराहारीमा नै छ ।
कोरोना अब सकियो झै व्यवहार गर्ने सरकारले हालसम्म यो देशभरका २८ प्रतिशत नागरिकलाई मात्र पूर्ण खोप उपलब्ध गराएको छ । खोप लगाउन अझ धेरै बाँकी छन् । कोरोनाको अवस्थालाई हेर्दा आदेश आवश्यक थियो होला । तर न दलहरुले नत जनताले नै टेर्ने अवस्थामा आदेश बेमौसमी बाजा बन्ने सम्भावना देखियो सिडिओ साब । सक्नु हुन्छ अब आदेश कडाईका साथ पालना गराउँनुस सक्नु हुन्न भने नेपाली जनताले थप रमिता नदेखाउनुस् ।
पूरै ७९ दिन विते शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा सरकार गठन भएको । सरकार विस्तार गर्न नसकेर आफै अलमलमा परेको गठबन्धनको यो सरकारलाई जिस्काउने अर्को ठाउँ नथपिदिनुस् ।